China Sugarcane Juicer Machinery Production Line fekitari nevagadziri |JUMP
Nhuga Juicer Machinery Production Line
nzimbe juicer muchina wekugadzira line/chirimwa
304 Stainless Simbi
25 Set/Sets pagore otomatiki juicer extractor muchina
Yakagadzika pasuru yemapuranga inodzivirira muchina kubva pakurova uye kukuvara.Firimu repurasitiki rekukuvadzwa rinochengetedza muchina kubva pakunyorova uye mukuora.Fumigation-yemahara package inobatsira iyo yakatsetseka tsika clearance.Iyo hombe saizi muchina uchagadziriswa mumudziyo usina package.Kana kuti zvinoenderana nezvaunoda
mukati memwedzi miviri
Otomatiki Juicer extractor muchina
.1. Kusaita enzyme uye kudzivirira ruvara rwenamira.
6. Multiple effect kuronga inopa hupfumi hwemhepo.
Tube muchubhu sterilizer
1. Iyo yakabatana inoumbwa neyakagashira tangi, superheated mvura tangi, pombi, chigadzirwa dual filter, tubular superheated mvura inoburitsa system, chubhu muchubhu kupisa exchanger, PLC control system, Control cabinet, steam inlet system, mavharuvhu uye sensors, nezvimwe.
2. Incorporated Italian tekinoroji uye zvinoenderana Euro-standard
3. Nzvimbo huru yekutsinhanisa kupisa, kushandiswa kwesimba shoma uye kugadzirisa nyore
4. Adopt mirror welding tech uye chengeta yakatsetseka pombi yakabatana
5. Auto backtrack kana isina kukwana sterilization
6. CIP uye auto SIP inowanikwa pamwe chete neaseptic filler
7. Liquid level uye temp inodzorwa panguva chaiyo
1.Adopt Italian tekinoroji, sub-head uye kaviri-musoro, inoenderera kuzadza, kuderedza kudzoka;
2.Kushandisa jekiseni reutsi kuti uvhare, kuve nechokwadi chekuzadza muaseptic state, hupenyu hwesherufu hwechigadzirwa huchaita twp makore pakupisa kwekamuri;
3.Mukuita kuzadza, uchishandisa turntable yekusimudza modhi kudzivirira kusvibiswa kwechipiri.
Welcome kutibata nesu:
Munhu wekuonana naye: Nina
Nharembozha/ wechat: +8613681836263
1.Ndeipi nguva yewaranti yemuchina?
Gore rimwechete.Kunze kwezvikamu zvekupfeka, isu tinopa mahara ekuchengetedza masevhisi ezvikamu zvakakuvadzwa zvinokonzerwa nekushanda kwakajairika mukati mewaranti.Waranti iyi haivharidzi kusakara uye kubvaruka nekuda kwekushungurudzwa, kushandiswa zvisizvo, tsaona kana kuchinjwa kana kugadziriswa zvisina mvumo.Replacement ichaendeswa kwauri mushure mekunge mufananidzo kana humwe humbowo hwapihwa.
2.Ibasa rei raunogona kupa usati watengeswa?
Chekutanga, tinogona kupa muchina wakakodzera zvakanyanya maererano nekugona kwako.Kechipiri, Mushure mekuwana chiyero chewekishopu yako, tinokwanisa kugadzirira dhizaini yemuchina wemusangano iwe.Chechitatu, tinogona kupa rubatsiro rwehunyanzvi pamberi uye mushure mekutengesa.
3.Ungavimbisa sei mushure mekutengesa sevhisi?
Tinogona kutumira mainjiniya kutungamira kuisirwa, kutumira, uye kudzidziswa zvinoenderana nechibvumirano chebasa chatakasaina.
Zvakapfuura: Otomatiki Stainless Simbi Pineapple Juice Processing Machines
Zvinotevera: Kutengesa Kupisa 100% Yakachena Watermelon Juice Processing Line
Shandura Kiyi Project yeTomato Powder Production Line
Zadzisa Automatic Blueberry Juice Concentrate ...
Kubudirira Kwepamusoro Prickly Pear Juice Kugadzira P...
Yakazara Seti yePapaya Juice Kugadzira Machine
Papaya Muto Processing Machine Plastic Bhodhoro ...